MATIU 12 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 12)
Ma Jisọs zara ha sị, “Ọ̀ bụ na unu agụtabeghị ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị na eze Devidi na ndị enyi ya mere mgbe agụụ gụrụ ha?
Nꞌihi na Nwa nke mmadụ ka ọ dịrị ikpebi ihe e kwesịrị ime nꞌụbọchị izuike.”
Ma Jisọs zara ha sị, “Ọ bụrụ na otu onye nꞌime unu enwee otu atụrụ danyere nꞌime olulu nꞌụbọchị izuike gịnị ka ọ ga-eme? Ọ̀ ga-ahapụ ya nꞌebe ahụ? Ọ gaghị agbalị wepụta ya?
Mmadụ ọ̀ dịghị mkpa karịa atụrụ? Ya mere, ọ dị mma ịrụ ọrụ ọma nꞌụbọchị izuike.”
Nke a mere ka amụma ahụ Aịzaya buru banyere ya mezuo. Nꞌihi na Aịzaya buru amụma sị,
Ọrụ a Jisọs rụrụ juru igwe mmadụ nọ nꞌebe ahụ anya. Nꞌihi ya, ha kwuru sị, “Ọ̀ ga-abụ na nwoke a bụ Onye nzọpụta ahụ, Nwa Devidi?”
Mgbe Jisọs nọ na-agwa igwe mmadụ ahụ okwu, nne ya na ụmụnne ya bịara guzo nꞌezi na-eche ka ha gwa ya okwu.
Ma Jisọs zara ya sị, “Onye bụ nne m? Òlee ndị bụ ụmụnne m?”
Nꞌihi na onye ọ bụla na-eme ihe Nna m bi nꞌeluigwe chọrọ, bụ nwanne m nwoke, na nwanne m nwanyị, na nne m.”